कार्यकर्ता उफ्रिदै, अपरिपक्वताको राजनीतिमा फसे उपेन्द्र, चौतर्फी आलोचना ! फुट्छ पार्टी ? – Sanghiya Online
Posted on : May 14, 2021 May 14, 2021 - No Comment
दुइ खेमामा विभाजित जनता समाजबादी पार्टी नेपालमा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले तटस्थ बस्ने निर्णय गर्ना साथ् सामाजिक संजालमा उपेन्द्र यादव नजिकका कार्यकर्ताहरुले ठाकुर नजिकका कार्यकर्ता तथा शुभ चिन्तकलाइ गालि गलौज गर्न उत्रेका छन् । उनीहरु आफै उत्रेका हुन् कि अध्यक्ष यादब को निर्देशनमा उत्रेका छन् यो यकिन गर्न कठिन छ । तथापि ठाकुर नजिकका एक केन्द्रिय सदस्य भन्छन -” उनीहरु लाइ यादबले नै उतारेका हुन्।” यो भन्दा अगाडी यसरी युद्ध झैँ वार गर्ने गरि कहिले पनि उनीहरु उत्रेका थिएनन। सामाजिक संजालमा कतिले त बाहुन र यादव भनेर समेत गाली गर्ने पाइएको छ। अहिले सामाजिक संजाल उनीहरुकै क्रियाकलापले भएको छ ।
कुनै बेला राष्ट्रिय राजनीतिमा निर्णायक मानिएका यादब अहिले अपरिपक्वताको राजनीतिको दलदलमा फस्दै गएका छन् । त्यसको कारण हो एकलौटी निर्णय गर्ने। लुम्बिनी प्रदेशका आफ्नै सांसदहरुलाई बहुमतको बल देखाएर कारवाही गरेका यादब नराम्री पछाडिएका हुन् । हुन् त कारवाही गरे पनि उनीहरु मन्त्रि बनेपछि उपेन्द्रलाई दुइ गुणा ठूलो झट्का लागेकै हो। किनभने कारवाही गरेर आफ्नै पार्टीमा आलोचनाको सहकार हुनु र उनीहरु मन्त्रि बन्नु । फेरी अहिले आएर प्रधान मन्त्रि केपी ओलीलाई हटाउनु भन्दा अगाडी नै संसदमा उपेन्द्रले अरु दलका नेताहरु भन्दा बढी नै आक्रोशित रुपमा चिच्याउदै भने तपाइँलाइ बिश्वासको मत दिन्न हटाउछु। तर हटाउन कता कता तिन दलको तर्फ बाट राष्ट्रपति कार्यालयमा बहुमतको दाबी समेत गर्न आँट गर्न सकेन । आवेगमा आएर गरेको दम्भको भाषणले उनि आफ्नै बन्चरोले आफ्नै खुट्टामा प्रहार गरेका छन् ।
एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीले बिश्वासको मत लिने कुरालाई सजिलै पराजित गर्ने र सरकार गठन गरेर सरकारमा जाने यादबको सपना ओली र राजनीतिक क्षेत्रमा जीवन व्यतित गरेका ठाकुरले चकनाचुर गरि दिएका छन् । उहा आफ्नै पार्टीका विरुद्ध जानु र प्रचण्ड र देउवाले भनेको कुरामा सजिलै बिश्वास गर्ने र आफ्नो दिमागले नसोच्ने नेता भएको प्रमाणित ठाकुरले गरिदिएको छ ।
अहिले सजिलै अनुमान गर्न सकिने कुरा के हो भने घोषणा हुन् बाकि रहेको जसपा लगभग फ़ुटिनै सकेको छ। घोषणा हुन् नसकेको अबस्थामा दुइ अध्यक्षले दुइ किसिमले निर्णय र बिज्ञप्ती जारी गर्ने गरेको छ । यसको दुइ वटा कारण हो। त्यो हो पहिलो ठाकुर पक्षका नेताहरु मधेशका माग पुरा गराउन चाहन्छन र त्यसमा सफल पनि भएका छन् । जस्तै १२० जना को मुद्धा फिर्ता लगायत। तर त्यसमा यादबलाइ खासै कुनै रुचि देखिएन। र दोस्रो कारण हो प्रचण्ड र देउवा को पछि लाग्नु बाबुरामको इशारामा। यदि यादब ठाकुर संग मिलेर निर्णय गर्ने हो भने जसपा नेपाल प्रधानमन्त्री पद समेत पाउन सक्छन । तर त्यो यादबलाइ पच्दैन । अब कहिले पार्टी फ़ुट्छ र घोषणा हुन्छ त्यो यादबको ब्यबहारमा फरक पर्छ ।